आज मंगलवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७६ मंसिर २४ गते [भिडियो] - Harekpal
आज मंगलवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७६ मंसिर २४ गते [भिडियो]
उपप्राध्यापक नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद् २४ मंसिर २०७६, मंगलवार ०१:१८ मा प्रकाशित
श्रीगणेशायनमः ।। आज विक्रम संवत् २०७६ साल मंसिर महिनाका २४ गते मंगलवार हो । सृष्टिदेखि हालसम्म १,९५,५८,८५१२० (एक अर्व, पञ्चानब्बे करोड अन्नठानब्बे लाख पचासीहजार १२०) वर्ष व्यतित भइसकेका छन् । कलिकालको ५१२० औँ वर्षअन्तर्गत श्रीशालिवाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११४०, ईशवीय संवत् २०१९ अन्तर्गत परिधावी नामक संवत्सर चलिरहेको छ ।
सूर्य दक्षिणायनमा छन् । हेमन्तऋतुअन्तर्गत मार्गशीर्ष शुक्लपक्षको त्रयोदशी तिथि बिहान १०।१६ बजेसम्म रहनेछ । यो महिनाका देवता केशव र मासदेवी विशालाक्षी हुन् । सूर्य वृश्चिक राशिमा छन् भने बृहस्पति धनु राशिमा छन् । कृत्तिका नक्षत्र बिहानका राति ६।३३ बजेसम्म रहनेछन् । यसैगरी आज शिव योग र गर करण रहेको छ । आनन्दादिमा गद योग रहेको छ । यसैगरी आज काठमाडौँमा सूर्योदय ६।४५ मा छ भने सूर्यास्त बेलुका ५।७ बजे हुनेछ ।
चन्द्रमा आज मेष राशिमा छन् । आज मंगलवार गणेशजीको उपासनासँगै राता वस्तुको प्रयोग शुभ रहनेछ । यसैगरी आज गणेशस्तोत्रपाठ, हनुमान चलिसा पाठ, गणेशअथर्वशीर्ष पाठ पनि शुभ रहनेछ । गणेशजीलाई दुवोका साथै लड्डु अर्पण पनि मनोवाञ्छासिद्धिदायी रहनेछ ।
१३ माघ २०७६, सोमबार ०१:११
१२ माघ २०७६, आईतवार ०१:११
११ माघ २०७६, शनिबार ०१:११